Izindaba - Indwangu ye-RPET (Recycled PET Fabric) yaziwa nangokuthi yindwangu eluhlaza yamabhodlela e-coke.
Indwangu ye-RPET (Indwangu Ephindiwe yePET) yaziwa nangokuthi indwangu eluhlaza yebhodlela le-coke. Luhlobo olusha lwendwangu eluhlaza okotshani olwenziwe kabusha ngentambo eyigugu ye-PET. Umsuka wayo ophansi wekhabhoni udale umqondo omusha emkhakheni wokuvuselelwa.Ngokuqinisekiswa kokuhlola, ingonga amandla acishe abe ngu-80% uma kuqhathaniswa nefayibha ejwayelekile ye-polyester eluhlaza.
Inqubo yokukhiqiza ihlukaniswe ngezinyathelo eziyisithupha: Phinda usebenzise ibhodlela eliyigugu → uhlole futhi uhlukanise amabhodlela ayigugu → sika ibhodlela eliyigugu → ukhiphe usilika, uphole futhi uqoqe usilika → uvuselele intambo ye-PET → indwangu yokweluka
Ngokuya ngohlobo lwentambo: indwangu yentambo, indwangu yokunwebeka, indwangu yokudla okuyisisekelo
Ngokwesitayela sokuluka: Indwangu ye-RPET Oxford yendwangu, izindwangu ze-RPET shells (logo), indwangu ye-RPET intambo (logo), indwangu ye-RPET peach isikhumba se-velvet, indwangu ye-RPET faux suede, izindwangu ze-RPET chiffon, izindwangu ze-RPET color butyl, indwangu ye-RPET LiXin (engeyona -woven), RPET indwangu conductive (esd), RPET ngendwangu Indwangu, RPET terylene Indwangu, RPET Indwangu, igridi RPET jacquard izindwangu, RPET ukunitha indwangu (indwangu), RPET anezikhala indwangu (isangweji anezikhala indwangu, ubuhlalu nendwangu anezikhala, inyoni indwangu ye-eye), i-RPET flannelette (uboya bama-coral, i-Farley velvet, uboya obusipolar, i-velvet emaceleni amabili, i-PV velvet, i-velvet ethambile kakhulu, i-velvet kakotini ethambile).
Impahla: isikhwama sekhompyutha, isikhwama seqhwa, isikhwama semali, ubhaka, itroli, ikesi lokuhamba, isikhwama sezimonyo, isikhwama sepeni, isikhwama sekhamera, isikhwama sokuthenga, isikhwama semali, isikhwama sesipho, iphakethe lesigaxa, isitiloli sezingane, ibhokisi lokugcina, ibhokisi lokugcina, isikhwama semithi, imithwalo nezinye izinto;
Indwangu yasekhaya: ikhava yombhede onezingcezu ezine, ingubo yokulala, emuva, uphonsa umcamelo, ithoyizi, indwangu yokuhlobisa, ikhava yosofa, iphinifa, isambulela, ijazi lemvula, umthunzi welanga, ikhethini, indwangu yokusula, njll.
Izembatho: izingubo eziphansi (ezibandayo), okwephula umoya, ibhantshi, ivesti, izingubo zezemidlalo, amabhulukwe asebhishi, isikhwama sokulala kwengane, isudi, isikhafu, ukugqoka umsebenzi, ukugqoka umsebenzi, imfashini, ingubo ye-opera, amaphijama, njll .;
Abanye: amatende, izikhwama zokulala, izigqoko, izicathulo, izindlu zangaphakathi zezimoto, njll.
Ithani elilodwa lentambo ye-RPET = amabhodlela epulasitiki angama-67,000 = amabhodlela epulasitiki angama-67,000 = 4.2 amathani e-carbon dioxide agciniwe = 0.0364 amathani kawoyela agciniwe = 6.2 amathani wamanzi agciniwe Kodwa okwamanje, yingxenye encane kuphela esetshenziswayo, kanti enye isalahlwa ngokuthanda, okuholela ngokuchitha izinsizakusebenza nokungcoliswa kwemvelo. Ngakho-ke, ubuchwepheshe bayo bokusebenzisa kabusha bunethemba elibanzi.